ဈေးတန်းထဲသို့ အလည်တစ်ခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဈေးတန်းထဲသို့ အလည်တစ်ခေါက်
Posted by aye.kk on Jun 11, 2012 in Photography | 43 comments
မြန် မာ နိုင် ငံ နှင့် ၊ တ ဖက် ထိုင်း နိုင် ငံ နယ် စပ် မြို့ လေး ဖြစ် သော ၊ တာ ချီ လိတ်-မယ်ဆိုင် ချစ် ကြည် ရေး တံ တား အ နီး ရှိ ၊ မယ် ဆိုင် မြို့စ နေ နေ့ ည နေ ခင်း ဈေး တန်း လေး သို့ အ လည် ရောက် စဉ် က ၊ ရိုက် ထား သော ပုံ လေး များ ဖြစ် ပါ သည်။
စ နေ ဈေး နေ့ ၊ ည နေ ခင်း ဈေး တန်း လေး ပါ။
အ ပေါ် က ပုံ နဲ့နည်း နည်း လေး ကွဲ ပါ တယ်။
သ ရေ စာ မုန့် ဆိုင် နဲ့ ကြက် ကင် ဆိုင် လေး မြင် ရ ပုံ။
သူ တို့ ဆီ က ယာဉ် ထိန်း ရဲ..။။
အ ချို့ က လည်း ဈေး လာ ခင်း တာ နောက် ကျ နေ ။
အ ချို ဖျော် ရည် ရောင်း ချ နေ သည့် ဈေး ခုံ လေး ကို တွေ့ ရ သည် ။ (သောက် လို့ တော့ ကောင်း ပါ သည်)
နိုင် ငံ ခြား သား တွေ လည်း ဗီ ဒီ ယို ရိုက် ကြ သည်။
ဈေး လာ လည် သူ နှင့် ၀ယ် သူ တွေ။
ကင် ပြီး သား အ သား များ ကို လည်း စား သုံး ရန် အ သင့် ရောင်း ချ သည်။
အ ထည် များ ချ ခင်း ရောင်း ကြ သည်။
ပ လက် ဖောင်း အ ရှေ့ ဖက် လှည့် ၍ လည်း ရောင်း ကြ သည် ။(အ ခု မှ ခင်း နေ တုံး)
ပ လက် ဖောင်း ပေါ် က ခွေး က လေး ၊ ဈေး သည် တစ် ဦး က အ င်္ကျီ ၀တ် ထား ပေး ။ (မေး ကြည့် မိ တော့ အေး မည် စိုး ၍ ဟု ပြော ပါ သည်)
မယ် ဆိုင် ချောင်း ဘေး ည နေ ရှူ ခင်း လေး တွေ့ မြင် ရ ပုံ။
ရေ ပေါ် ဈေး ဆိုင် (သူ တို့ အ ခေါ် အ ဝေါ်)၊ စား သောက် ဆိုင် တန်း လှမ်း မြင် ရ ပုံ။
ဒါ က တော့ တံ တား ပေါ် မှာ ၊ ထိုင်း တွေ သူ တို့ ဘက် ကမ်း ပြန် လာ နေ ကြ တဲ့ ပုံ ။
တံ တား ပိတ် ခါ နီး ဆို တော့ ပြန် ကုန် ကြ ပြီ။
အား လုံး လည်း စိတ် အ ပန်း ပြေ မည် ဟု ယူ ဆ မိ ပါ သည်။။
မယ်ဆိုင်ချောင်းလေးက ရေကျနေတယ်မှတ်တာပဲ။ တခါ သွားလည်တုန်းက ရေတော်တော်များတယ် ထင်တယ်။ တခေါက်ပဲ ရောက်ဖူးတာပါ။
မရောက်တာ ကြာနေပြီ။ သူတို့ ဈေးတန်းက မုန့်တွေ စားကောင်းတာတော့ မှတ်မိတယ်။ သုံးလည်း သုံးပျော် ၀ယ်လည်း ၀ယ်ပျော်တယ်။
beer သောက်ရင်းဝင်ကြည့်မိတာမို့ ကြက်ကြော်ဝါးသွားကြောင်းရယ်ပါ
သတ်သတ်ရပ်ရပ် လေးနဲ့ခုလို့ ညဈေးတန်းအဖြစ်
လမ်းပေါ်မှာ သူရောင်းခွင့်ပြုထားတာ သဘောကျမိသဗျာ…
ခုလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ aye kk ရေ….
အဲဒါ.. ဘယ်နိုင်ငံအခြမ်းက ဆိုင်းဘုတ်လဲဟင်င်..
ဆိုင်းဘုတ်တွေက မြန်မာလိုရော၊ ထိုင်းလိုရော တွေ့ရတယ်နော်။
စကားပြောတော့ရော ဘာစကား ပြောကြသလဲ မသိဘူး။
ဈေးဆိုင်တန်းလေးကြည့်ရတာ ပျော်စရာ၊ သွားတောင် လည်ချင်တယ်။
ဒါပေမယ့် မအေးရဲ့ မျှဝေမှုကြောင့် ထိုင်ရာကမထရပဲ ရောက်ခဲ့ရပြီ။
ထိုင်း-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်လို့ ၊ထိုင်းဖက်အခြမ်းကမယ်ဆိုင်မြို့ မှာ
တစ်ပတ်လုံးမှာမှ စနေတစ်ရက်ပဲ ဈေးဖွင့်တာလား မသိဘူးနော်။
ညနေ ၄ နာရီနောက်ပိုင်းမှ လာရောင်းကြတယ်ဆိုတော့ တံတားပိတ်ချိန်က ဘယ်အချိန်လဲ သိချင်သား။
ဓါတ်ပုံတွေမြင်ရတာနဲ့တင် တကယ်ရောက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ် …
ထိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ ကျောင်းဝတ်စုံက အာရှတိုက်မှာ ဆက်စီအဖြစ်ဆုံးဒဲ့… အဲဒါမျိုးကြတော့ ဘဒူမှတင်ဂျဝူး….။
ဖတ်ရတာနဲ့တင် မြင်ဖူးချင်စိတ် အရမ်းဖြစ်မိတယ်ဗျာ
အန်တီအေးရေ … အတော်စည်တဲ့နေရာလေးပဲနော် … ။
နယ်စပ်နေရာလေးတောင် …. အမှိုက်သရိုက်အတော်နည်းတယ် … …. စည်းကမ်းရှိတယ်လို့ ပြောရမယ် … ။ ဈေးဆိုင်ခန်းတွေက ကိုယ်ရောင်းချင်သလို ရောင်းလို့ရတာမျိုး ၊ ဦးရာလူစနစ်မျိုးလားဟင် …. ။
အကျီ င်္ဝတ်ထားတဲ့ ခွေးလေးက ချစ်စရာလေး … ကြည့်ရတာ သူဝတ်နေကျဖြစ်မယ်ထင်တယ် .. ရှိုးအပြည့်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတယ် ….
ဓါတ်ပုံတွေ မြင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။
ဒီမိုကရေစီဖွံ့ ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံကနယ်စပ်အစွန်အဖျားမြို့ လေးမှာတောင်စည်းကမ်းရှိတာ….
အားကျစရာပါ…။(အမှိုက်ကလမ်းမှာပစ်ခွင့်မရှိဘူး)ပစ်တာတွေ့ ရင်တော့ဒဏ်ငွေ(၅၀၀)ဘတ်လို့ ပြောတာပဲ…။
ခွေးလေးကလူသွားလမ်းပေါ်မှာတွေ့ လို့ ဓါတ်ပုံရိုက်မိတာ..
အန်တီအေးရေ .. ပြန်ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါနော် …. ။
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ … ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လှမ်းနေဆဲဖြစ်တာတောင် … အမှိုက်တွေ ကြုံသလို ပစ်ချတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ပြင်မရသေးဘူး ။ ဒီမှာလည်း လူစည်ကားရာနေရာတွေမှာ အမှိုက်ပစ်လျှင် ဒဏ်ရိုက်သင့်တယ် .. ဒါဆို တဖက်တလမ်းက … ဘဏ္ဍာငွေ ပိုထွက်လာမယ်ထင်တယ် …. ။ အဲ့ဒီ ပိုက်ဆံနဲ့ …. မျဉ်ကြားတွေထင်အောင်ပြန်တား … ၊ ကားမှတ်တိုင်တွေပြင် ၊ အမှိုက်ပုံးတွေထားပေး … စတာတွေ ပြန်သုံးနိုင်လျှင် အရမ်းကောင်းမှာပဲ .. ။ (စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာ )
မေ၇ာက်ဖူး မသွားနိုင် နေရာတွေကို ဓါတ်ပုံကနေတဆင့် အလည်သွားခွင့်ပေးတာ ကျေးကျေးပါဗျာ။
ဒါ့ပုံတွေကြည့်ပြီး တာချီလိတ် မှာနေခဲ့ရတဲ့ အချိန်လေးတွေကို ပြန်သတိရမိသားးး
တာချီလိတ်နဲ့မယ်ဆိုင်က ဟိုဘက်ကမ်းဒီဘက်ကမ်းတာဆိုတယ် တိုးတက်မှုအပိုင်းမှာတော့
တော်တော်လေးကိုကွာတယ် …. ပြန်လည်သတိရ လွမ်းဆွတ် တမ်းတ အောင် ဒါ့ပုံတွေ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ …
အန်တီ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး
ဈေးထဲက လိုချင်တာတွေကို ယူသွားပါတယ်ရှင့် …
မရောက်ဖူးတဲ့နေရာကို ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး ၀င်လည်သွားပါတယ် …….
အင်္ကျီဝယ်၊ကြက်ကြော်စား၊အချိုရည် သောက်လို့
မမအေး၇ယ်…….ဗိုက်ဆာလို……ကြက်ကင်နဲ…..ဖျော်၇ည်လေး မ သွားပြီနော်……
ဈေးဝယ်လို့ကောင်းမယ့်နေရာနဲ့တူပါတယ် ……. နယ်စပ်ဆိုဘယ်နယ်စပ်မှလည်းမရောက်ဖူးသလို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတောင် အစုံအစိမလည်မပတ်ဖူးခဲ့ပါဘူး အခုလိုရွာသူရွာသားတွေ ဝေမျှတဲ့ပုံလေးတွေ နဲ့ ပဲ နေရာအစုံရောက်ဖူးခဲ့ပါတယ် …… ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမအေး
ခုမှပဲ အန်တီအေးနဲ့ အတူ မယ်ဆိုင်ဈေးကို ရောက်တော့တယ်။ ကဲ ရေပေါ်ဆိုင်တမ်းက စားသောက်ဆိုင်မှာ သွားစားကြမယ်လေ အန်တီအေး ကျွေးမှာမလား.. ဆိုင်လေးတွေလည်း ၀ယ်ဖို့တဲ့ လှည့်ပြီး လျှောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ ဈေးတွေကရော ကြီးလားဟင်..
တစ်လ တစ်ကြိမ်လခချတဲ့နေ့မှာ ဖွင့်တဲ့ဈေးလေးပါ။
အန်တီအရွယ်မို့ အန်တီလို့ ပဲခေါ်ပါနော်..
ကိုပေါက်ကိုဘုရားဖြူပို့ ပေးချင်တယ်၊အရမ်းအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးမို့ ပါ။
သူတို့နိုင်ငံရဲ့ လမ်းအလယ်က တိုင်တွေပေါ်မှာ ဂဋ္ဌုန်ရုပ်တွေ တင်ထားတာများလားပဲ။ အဲဒီနားက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ဘက်အခြမ်းမှာရော ခြင်္သေ့ရုပ်တွေ မရှိဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် အရုပ်တွေ မရှိဘူးလား။ မရောက်ဖူးလို့ မေးကြည့်တာပါ။
“ကင် ပြီး သား အ သား များ ကို လည်း စား သုံး ရန် အ သင့် ရောင်း ချ သည်။” ဆိုတဲ့ စာသားရဲ့ အထက်က ပုံထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ဘုန်းကြီးဆောင်းထီးများ ဖြစ်နေမလားပဲ။ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာဆိုတော့ ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ မြို့ တော်ဝန်စည်ပင်ကဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်..။
တိုင်းပြည်ကိုချစ်တာအလုပ်နဲ့ လက်တွေ့ ပြသထားသလိုပါပဲ..။။
အန်တီအေးရေ… တာလော့ဈေးလေးကိုလည်း ရိုက်ပြီးတင်ပါအုံးဗျ …